PES emepụta na suppliers - China PES Factory
PES na-agbaze agbaze nrapado film maka aluminum obubọk
HD112 bụ ihe polyester mere ngwaahịa. Enwere ike iji mpempe akwụkwọ mee akwụkwọ a ma ọ bụ na-enweghị akwụkwọ. A na-ejikarị ya na mkpuchi aluminum tube ma ọ bụ panel. Anyị na-eme ya obosara nkịtị nke 1m, a ga-ahaziri obosara ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ ngwa dị iche iche nke nkọwa a. HD112 bụ iji ...
PES ọkụ gbazee nrapado film
Ọ na-gbanwetụrụ polyester ihe mere ngwaahịa na akwụkwọ wepụtara. O nwere mpaghara agbaze site na 47-70 ℃, obosara nke 1m nke kwesịrị maka ihe akpụkpọ ụkwụ, uwe, Akụrụngwa ịchọ mma akpaka, textiles ụlọ na mpaghara ndị ọzọ, dị ka akara baaji. Nke a bụ ihe ọhụrụ ihe compolymer na ala ba ...
PES gbazee ụdị nrapado ihe nkiri
Nkọwapụta a dị ka 114B. Ihe dị iche bụ na ha nwere ndepụta agbaze dị iche na agbaze agba. Onye a nwere akwa agbaze elu. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ihe nlereanya kwesịrị ekwesị dịka usoro nke aka ha si dị iche na ụdị akwa dị iche iche. Ọzọkwa, anyị nwere ike c ...
PES gbazee nrapado web nkiri
Nke a bụ omentum nke PES. Ọ nwere nnukwu ntupu ntupu, nke na-enye ya ohere inweta ezigbo ume. Mgbe ejiri ya na akwa, ọ nwere ike iburu n'uche njikọta njikọta na ikuku ikuku nke ngwaahịa a. Ọ bụ mgbe etinyere ụfọdụ ngwaahịa na-achọ dịtụ elu ikuku Pee ...